Costa Cruises inotenderera kunze kweCosta Toscana ngarava
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Costa Cruises inotenderera kunze kweCosta Toscana ngarava
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Finland Kuputsa Nhau • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ngarava nyowani yeItaly cruise mutsara weLNG uchaendeswa muna Zvita
Costa Cruises, iyo kambani yeItaly yeCarnival Corporation & plc, nhasi yapemberera mhemberero yekutsvaira kweiyo nyowani flagship Costa Toscana kuMeyer shipyard muTurku, Finland.
Costa Toscana, sehanzvadzi yake ngarava Costa Smeralda, inofambiswa negasi rakasanganiswa (LNG), iyo indasitiri yemumvura hunyanzvi hwehunyanzvi hwemafuta huripo parizvino hwekudzora mweya, mugungwa uye panguva yekufona. Costa Group, iyo inosanganisira Costa Cruises, Germany-based AIDA Cruises neCosta Asia, ndiyo yaive yekutanga muindasitiri yezvikepe pasi rose kuunza tekinoroji iyi, ichiraira ngarava shanu dzinofambiswa neLNG, mbiri dzadzo, Costa Smeralda neAIDAnova, vatove. akapinda sevhisi. Ivo vari chikamu chehurongwa hwekuwedzera hunosanganisira zvikepe zvinomwe zvitsva zvinofanirwa kuendeswa kuCosta Group na2023, kwehuwandu hwekudyara hunopfuura mamirioni matanhatu emadhora.
Munguva yemhemberero yekuyerera, Costa Toscana akabata zviri pamutemo gungwa kekutanga, nemafashama ebhesin kwaakavakwa mumwedzi yapfuura. Iye achazopinda mushumiro muna Zvita 2021, kana izvo zvemukati fittings zvapera.
Mario Zanetti, mukuru wezvekutengeserana we Costa Cruises uye mutungamiri weCosta Group Asia, akati: "Kunyangwe paine mamiriro ezvinhu akaoma, Costa Group iri kusimbisa kudyara kwayo mukuwedzera kwezvikepe. Tine chivimbo mukudzoserwa kwemaindasitiri edu, uye tinofara nekuuya kwezvikepe zvitsva seCosta Toscana, iyo inomiririra izvo zvinhu zvatinoda kutarisa kune ramangwana. Chekutanga pane zvese, ingarava yakanaka kwazvo uye ine hunyanzvi, inokwezva vatengi vatsva, ichave yakakosha, kunyanya kana vanhu vachizokwanisa kufamba zvakasununguka zvakare uye vachange vaine chishuwo chikuru chezororo. Tichitarisa kupfuura chirwere ichi, chechipiri chinhu chatiri kutarisa nezvacho kupedzisa kushandurwa kwezvikepe zvedu uye mashandiro kuita mhando inochengetedza. Pamusoro peiyo tekinoroji yeLNG, tiri kuvandudza dzimwe mhinduro, senge simba remahombekombe nemabhatiri, apo isu tichienderera mberi nekushandira kuzadzisa zemo nekufamba kwenguva. "
“Kuyerera-famba kunogara kuri chiitiko chakakosha kwazvo kwatiri isu vavaki vengarava, sezvo ngarava inozogadzirisirwa nharaunda yayo. Sezvo uku zvakare kuri kutanga kweyekupedzisira nhanho yekuvaka ngarava, ese anonakidza mavara, nzvimbo nenzvimbo zvinotanga kutora fomu yavo yekupedzisira. Mumwedzi iri kuuya anozopedziswa padenga uye ozoedzwa nekugadzwa mumatsutso kuti aendese, "CEO weMeyer Turku, Tim Meyer, akadaro.
Costa Toscana yakagadzirirwa kuve inofamba "guta rakangwara," uko mhinduro dzisingagumi uye pfungwa dzedenderedzwa dzehupfumi dzinoshandiswa kudzikisira kukanganisa kwezvakatipoteredza. Kutenda kushandiswa kweLNG, zvinokwanisika kubvisa kuburitswa kwesulfure dioxide (zero kuburitsa) uye kuisa zvinhu mumhepo (95-100% kudzikisira), uku uchidzikisa zvakanyanya kuburitsa kwenitrogen oxides (kuderedzwa kwakananga kwe 85% ) uye CO2 (kusvika ku20%). Ari mubhodhi, akasarudzika desalinization zvinomera zvichagadzirisa mvura yegungwa yakanangana nekusangana nezvinodiwa zvemvura zvezuva nezuva, uye simba rekushandisa richadzikiswa kusvika padiki nekuda kwehungwaru hwekushandisa simba sisitimu. Uye zvakare, 100% yakaparadzaniswa kuunganidzwa uye kudzokororwazve kwezvinhu zvakaita sepurasitiki, bepa, girazi uye aluminium ichaitwa mubhodhi, sechikamu chemubatanidzwa nzira yakanangana nekutsigira yakatenderedza hupfumi mapurojekiti.
Iyo mireza nyowani mutero kuTuscany, mhedzisiro yeanoshamisa ekugadzira chirongwa, chakarongedzwa naAdam D. Tihany, yakagadzirirwa kusimudzira nekuunza kuupenyu munzvimbo imwechete inoratidza zvakanakisa dunhu rino rakanaka reItari, iro rinopa zita raro kune ngarava, madheki ayo nenzvimbo huru dzeveruzhinji.
Tihany akashanda nedziva repasi rose remakambani ane mbiri ekuvaka - Dordoni Architetti, Jeffrey Beers International uye Partner Ship Dhizaini - kugadzira nzvimbo dzakasiyana dzechikepe. Yese midziyo, mwenje, machira uye zvishandiso zvinogadzirwa muItari, ingave yakajairwa kugadzirwa kana yakagadzirirwa zvakanakira iyo nyowani flagship nevashanu vadyidzani vanomiririra kwazvo kugona kweItaly.
Izvo zvivakwa zviri mubhodhi zvinokwana zvakakwana mune ino inoshamisa mamiriro: kubva kuSolemio Spa kuenda kunzvimbo dzakatsaurirwa kuvaraidzo; kubva kumabhawa ane themed, mukubatana nemhando huru dzeItaly, kumaresitorendi gumi nematanhatu nenzvimbo dzakatsaurirwa "ruzivo rwechikafu," kusanganisira iyo resitorendi yakapihwa kumhuri ine vana, uye iyo LAB Restaurant, kwaunogona kuyedza hunyanzvi hwako hwekubika uchitungamirirwa yevakuru vaCosta.
"Mwoyo" wechikwata chitsva chichava "Colosseo," nzvimbo iri pakati pengarava yakapararira pamusoro pematanho matatu, yakapihwa kune yakanyanya kuratidzwa. Iwo makuru masikirini, akaiswa zvese pamadziro uye padenga, anopa mukana wekugadzira imwe nyaya munzvimbo yega yega yekufona uye munguva dzese dzezororo.
Zvakare isingafanire kupotswa masitepisi mahombe pamatanho matatu akatarisana nekumabvazuva: nzvimbo yakanaka yekuvaraidza vashanyi, vese vakuru nevadiki, ine balcony yemhepo yakavhurika padenga repamusoro rine furati yekristaro iyo inoita kuti iwe unakidzwe ne "kubhururuka" ”Pamusoro pegungwa.
Kuti uzorodze uye unakirwe nezuva pachave nemadziva mana ekushambira, rimwe rawo richava mumba nemvura yemunyu, iine kirabhu nyowani yemahombekombe, iyo ichagadzirisa mamiriro ezvinhu enzvimbo yekugezesa chaiyo.
Inonyaradza uye inoyevedza, iwo anopfuura mazana maviri nemazana matanhatu emakamuri ari muchikepe anonyatso kuratidza chimiro cheItaly uye kuravira. Iyo "Sea Terrace" makabheji anozopa veranda yakanaka kwaunogona kudya kwekuseni, kunwa aperitif kana kungonakidzwa nemaonero.
Costa Toscana ichaita mutambo wayo muBrazil mumwaka wa2021-22. Kunyanya, yekutanga yegore Idzva Eve cruise ichasimuka kubva kuSantos muna Zvita 26, 2021, nerwendo rwevhiki rese kushanyira Salvador neIlhéus, uye kudzokera kuSantos muna Ndira 2, 2022. Kubva Ndira 2 kusvika Kubvumbi 10 2022, Costa Toscana ichapa dzimwe gumi neshanu dzinofamba nenzira imwecheteyo, dzichitanga muSantos neSalvador. Ngarava gumi neshanu dzinosanganisira kusimuka kweCarnival neIsita, inova ndiyo yekupedzisira ngarava pamberi pekuyambuka kweBrazil-Italy, ichibva kuSantos musi waApril 15, 15.